Obodo Mexico na 'n'elu 1' nke ogo ogo akwụkwọ njem Travel + Leasure | Akụkọ Njem
Obodo Mexico na 'n'elu 1' nke ogo ogo akwụkwọ njem Travel + Leasure
Carmen Guillen | | General, Mexico DF, Noticias
Ọmarịcha akwụkwọ akụkọ ahụ Njem + Leasure mere nnyocha n'etiti ndị na-agụ ya. N'ime ya, ọ na-eche n'ụzọ doro anya obodo kachasị mma ịga leta na nsonaazụ ya bụ ihe ịtụnanya. Ọ bụghị n'ihi na obodo mmeri ahụ ekwesịghị ọnọdụ ahụ, mana n'ihi na onye ọ bụla nọ na-akụ nzọ na nnukwu obodo ndị ọzọ mara amara nke ọma na ndị njem nleta na-eleta ọtụtụ afọ.
Anyị anaghị egbu oge na akụkọ ahụ, na n'okpuru anyị ga-agwa gị obodo Mexico bụ onye mmeri nke ọnọdụ dị nsọpụrụ na nke bụ obodo ndị ọzọ 14 fọdụrụ na-enwetakwa akara dị mma na nyocha ahụ.
1 San Miguel de Allende, mmeri obodo Mexico
2 Gini bu ihe puru iche banyere San Miguel de Allende ileta?
San Miguel de Allende, mmeri obodo Mexico
Ke akpa ini ke isua 22 San Miguel de Allende abụrụla obodo Mexico na-emeri emeri na nyocha a nke obodo kacha mma ị ga-aga n'ime afọ 2017 a.
Mana n'ezie ajụjụ kachasịkarị ị na-ajụ ugbu a bụ ihe ha dabere na ya iji depụta ndepụta ahụ. Ha gakwuru ndị na-agụ ha ka ha gụọ maka ahụmịhe njem ha na ihe ndị ha masịrị ha na ndụ ha gbara gburugburu ụwa. Nsonaazụ nke ihe a niile etinyela obodo Mexico na ọnọdụ mbụ yana ọnọdụ ndị ọzọ ka obodo dị iche iche ma dị iche iche.
Ọ bụrụ na ị na-eche ihe nchịkọta na nchịkọta izugbe nke nyocha a dị, nsonaazụ ya bụ ihe ndị a:
Siam Nweta, Cambodia.
Ee, naanị obodo Spanish nke pụtara bụ Barcelona, ​​na ebe ikpeazụ ... Mba anyị anaghị arụ ọrụ nke ọma na nyocha a, mana na-echebara ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ebe magburu onwe ya gburugburu ụwa iji hụ ma gaa, ọ bụghịkwa ka anyị mee mkpesa nke ukwuu!
Gini bu ihe puru iche banyere San Miguel de Allende ileta?
A na-ahụ San Miguel de Allende dị ka otu n’ime obodo mara mma na Mexico. Ọ bụ obodo ebe agba dị n’okporo ụzọ ya ochie. Bụ cosmopolitan obodo, nwere nnukwu patio ebe ahịhịa kacha dị egwu ezi ihe atụ na ụlọ ndị mara mma.
San Miguel de Allende na-anata kwa afọ ọtụtụ ndị njem si n'akụkụ ụwa niile bụ ndị na-aga eleta ụdị ụlọ ya. Ọzọkwa spa na ebe a na-ekpo ọkụ bụ ihe na-adọrọ mmasị iji dọta ọtụtụ ndị ọbịa na nke kpatara ya ka a mara ya obodo nke isi iyi.
Ọzọ ike isi pụta ìhè nke a obodo bụ na ọ bụ Ihe nketa nke mmadu, Ọ bụghị naanị na ihe niile e kwuru na mbụ, kamakwa ọtụtụ ọrụ nka na ọdịbendị nke enwere ike ịnụ ụtọ afọ niile.
Dị ka ọ bụ obodo nwere ọtụtụ ihe na-egosi, ọ bụrụ na ị gaa ebe ahụ, anyị nwere ike ịkwado njem nke ọ dịkarịa ala ụbọchị 5 zuru ezuỌ bụrụ n’ịchọrọ ịpụ ebe ahụ tinye anya na ọdịbendị Mexico na ọkachasị n’obodo a mara mma. Anyị na-atụ aro iyi akpụkpọ ụkwụ dị mma nke ukwuu, ebe ọ bụ obodo ọ na-atọ gị ụtọ ịga ije. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya inyocha ya iji nwee ike iguzo n'akụkụ ọ bụla gbara ọkpụrụkpụ (enwere ọtụtụ).
Ọ bụrụ n ’isi ihe ga-echegbu gị mgbe ị na-aga njem ebe ahụ bụ na ebe ịnọ, ọ naghị adaru nso n’obodo ahụ mere eme, emekwaghị ya ọfụma! San Miguel de Allende bụ obodo ebe ihe niile dị nso, Yabụ site na iji ụgbọ njem ọha ma ọ bụ ụkwụ ị nwere ike ịkwaga zuru oke site n'otu ebe ruo ebe ọzọ.
Ọ bụrụ na ọpụpụ gị ịhụ obodo a dị nso, ị kwesịrị ịma na SMA Music Ememme bidoro na Ọgọstụ 4 na Pelọ ihe nkiri Angela Peralta. Ihe ngosi a ga - adi n’abali iri-ano rue abali iri-isii na isii.
Kedu ihe ị chere gbasara nkọwa nke obodo a mara mma? You maara nke ịdị adị ya? Mgbe ha hụsịrị onyogho ya na ịmatakwu banyere ihe obodo ahụ nwere, ị chere na ọnụọgụ a kwesiri ma ọ bụ ikekwe ha ejirila onyinye a "meebiga ihe oke"?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Obodo Mexico na 'n'elu 1' nke ogo ogo akwụkwọ njem Travel + Leasure
Obodo 9 mara mma maka mgbapụ